Xulka Sweden oo wali raja leh ka dib markii xaley laga badiyey - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Nederländ iyo Sverige oo ku ciyaarey garoonka Amsterdam Arena. Foto: Jonas Ekströmer / TT /
Xulka Sweden oo wali raja leh ka dib markii xaley laga badiyey
Xulka Sweden oo koobka adduunka raja ka qaba markii xaley 2-0 looga badiyey.
La daabacay onsdag 11 oktober 2017 kl 10.02
Xulka qaranka kubadda cagta Sweden ayaa habeenkii xaley guuldaro kala kulmey ciyaarta isreebreebka koobka aduunka oo dhexmartey iyaga iyo xulka qaranka Nederland.
Ciyaarta labadaas kooxood dhexmartey ayaa laba gool iyo eber waxaa looga badiyey xulka qaranka Sweden.
Xulka dalkan Sweden ayaa ka mid ah siddeed kooxood oo qaaradda yurub isreebreebkii loogu tartamayey ka qeybqaadashada koobka adduunka 2018 ka galey kaalinta labaad.
Siddeedaan kooxood oo laga rabo afar kooxood oo tartankaas caalamiga ah ee koobka adduunka u gudubta ayaa maalinta talaadada loo qori tuuri doonaa sidii ay isugu aadi lahaayeen.
Afarta kooxood ee ciyaarahaas badisa ayaa u gudbi doona ka qeybqaadashada tartanka koobka adduunka 2018-ka kaas oo lagu qaban doono dalka Ruushka.
Kooxaha laga yaabo in ay qori tuur ahaan Sweden ku soo aadaan ayaa waxaa ka mid ah dalalka Talyaaniga, Schwiez, Kroatien iyo Denmark.
Si xulka kubadda cagta Sweden uu ugu gudbo tartanka adduunka ee kubadda cagta 2018-ka waa in ay ka badiyaan kooxda uga soo aada qori tuurka maalinta talaadada ah la sameyn doono.
Richard Henriksson oo idaacadda Sweden dhanka ciyaaraha uga faalooda ayaa faalo ka bixiyey afarta kooxood oo dalkaan Sweden ciyaar ahaan ku soo aadi kara kuwaas oo kala ah Talyaaniga, Schwiez, Kroatien iyo Denmark.
Richard Henriksson oo ka faaloonaya xulka qaranka Schwiez ayaa yiri sidan:
- Tababaraha xulka qaranka Schwiez wuxuu kooxdaas soo tababarayey muddo aad u dheer kooxooda oo dhammina waa kuwa isciyaar yaqaan oo muddo dheer soo wada ciyaarayey, laakiin sidaas oo ay tahay kooxdaani muddooyinkii danbe oo dhan lama kulmin imtixaan culus oo dhanka ciyaaraha ah, ayuu yiri Richard Henriksson.
Richard Henriksson oo ka faaloonaya xulka qaranka Talyaaniga ayaa yiri sidan:
- Xulka Talyaanigu waa koox mar walba farsama ahaan isku xiran, mar walbana isha ku haysa meelaha kooxda ay la ciyaarayaan ku jilicsan yihiin si ay farsama ahaan taas uga faa’iideystaan, ayuu yiri Richard Henriksson.
Xulka qaranka dalka Kroatien ayaa isna ka mid ah kooxaha laga yaabo in ay ku soo aadaan ciyaar ahaan xulka qaranka Sweden, sidee ayuu Richard Henriksson kooxdaas iyana u arkaa:
- Kooxdaan waxaa ku jira cayaartooy markii mid mid loo fiirsho ah kuwa aad iyo aad u kulul oo runtii khalkhal weyn galin kara difaaca xulka qaranka Sweden, ayuu yiri Richard Henriksson.
Ugu danbeyntii sidee Richard Henriksson u qiimeeyey xulka qaranka Denmark oo isna laga yaabo in uu noqdo kan ciyaar ahaan ku soo aada xulka qaranka Sweden:
- Qaabka kooxdaani hadda aad ayuu uga fiican tahay jileecii iyo habacsanaantii uu markii hore ku bilowdey. Tusaale ahaan xulka Poland ayey kooxdaani saddex gool iyo eber uga badiyeen ciyaartii labadaas kooxood dhexmartey, kooxdaan difaaceedu waa mid aad iyo aad u jilicsan waxaa si fiican uga faa’iideysan kara cayaartoyda xulka Sweden ee dhanka weerarka, ayuu yiri Richard Henriksson.